लिंग टेढो हुने कस्तो समस्या हो - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
म २४ वर्षीय युवक हुँ । मेरो लिंग धेरै नै टेढो छ । मलाई यौनसम्पर्कमा असाध्यै रुचि छ । यौनसम्पर्कको याद आयो भने हातले लिंग नचलाई बस्न सक्दिनँ । यो उपाय अवलम्बन गरेको सात वर्षजति भयो । कतै यसैका कारण मेरो लिंग त्यस्तो भएको त होइन ? यो कस्तो समस्या हो ? म चाहेर पनि आफूलाई रोक्न सक्दिनँ । हातले हल्लाएन भने पनि धेरै कम असर हुन्छ । यौनसम्पर्क गर्दा पनि छिटै वीर्य स्खलन हुन्छ । मेरी यौन पार्टनर मेरो लिंग असामान्य छ भन्छिन् अनि यौनसम्पर्क गर्दा कम आनन्द प्राप्त भएको कुरा बताउँछिन्, बरु बढी पीडा हुन्छ रे !
टेढोपन निकै छ भने समस्या गम्भीर हुनसक्छ, तर यस्तो स्थिति अति नै कम हुन्छ । मूत्रनलीको विकासमा गडबडी भएर टेढोपन भएको (hypospadias) स्थितिमा लिंग तलतिर बांगो हुन्छ । लिंग निश्चित (स्थायी) रूपमा बांगो भएको अवस्थालाई chordee भनिन्छ । मूत्रद्वारको संक्रमण पनि यस्तो बांगोपनको कारण हुनसक्छ । Peyronie's disease मा सामान्य लिंग अकस्मात निकै बांगो भै यौनसम्पर्क नै गर्न नसक्ने हुनसक्छ र दुख्छ पनि । पक्का रूपमा कारण थाहा नभएको यो रोग अक्सर ४० वर्षभन्दा माथिका मानिसलाई लाग्छ, जुन तपाईंलाई भएको भन्ने आधार छैन । यस्ता गम्भीर समस्याका लागि मात्र चिकित्सकको सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
अन्त्यमा के भनौं भने पीडादायक तथा अप्ठ्यारो यौनसम्पर्कलाई चिकित्सकीय भाषामा Dyspareunia भनिन्छ । महिलामा यौनसम्पर्कका बेला अनेक कारणले पीडा हुनसक्छ । एउटा प्रमुख कारण योनि सुख्खा हुनु हो । अर्को महत्वपूर्ण कारण योनिको मांसपेशी कडा हुनु हो । यस किसिमको अवस्थालाई Vaginismus भनिन्छ । धेरैजसो अवस्थामा भयातुर वा डर नै यसको कारण हुन्छ । त्यसबाहेक प्रजनन अंगको संक्रमण पनि त्यसको कारण हुन सक्छ । त्यसैले उपचारका लागि यतातिर पनि ध्यान दिई समस्याको कारण पत्ता लगाई त्यसको समाधान गर्नु आवश्यक छ ।